ရှမ်းပြည်နယ်ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီဒုဥက္ကဋ္ဌ ဝါဆိုသင်္ကန်းဆက်ကပ်လှူဒါန်း – ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးသန်းဌေးမှ တစ်နိုင်ငံလုံး ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေးသဘောတူစာချုပ် (NCA) ချုပ်ဆိုခြင်း (၅) နှစ်ပြည့် နှစ်ပတ်လည်နေ့တွင် ပေးပို့သည့် သ၀ဏ်လွှာ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၁၅ ရက် ၁၃၈၂ ခုနှစ်၊ တောင်သလင်းလပြည့်ကျော် ၁၄ ရက်
အင်းတော်ကြီးဒေသတွင် ကိုယ်စားလွယ်လောင်း ၃ ဦးပါ ဆိုင်းဘုတ် စိုက်ထူခြင်းဆောင်ရွက်
ကရင်ပြည်နယ် ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီမှ ဘားအံမြို့ ကမားကျောင်းတိုက်ဆရာတော်၏ ဈာပနပူဇာရေစက်ချ အခမ်း အနားအတွက် အလှူငွေ သွားရောက်ဆက်ကပ်လှူဒါန်း
Covid-19 ဥပဒေနှင့်အညီ ပြည်သူများ၏ ကျန်းမားရေးကို အလေးထားပြီး ညောင်လေးပင်မြို့နယ် အတွင်းရှိ ကျေးရွာအုပ်စုများသို့ မဲဆွယ်စည်းရုံး
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ဒုဥက္ကဌ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးစောဝင်းမောင် ရွာသာကျေးရွာမှ ပြည်သူများနှင့်တွေ့ဆုံ
ကမာရွတ်မြို့နယ် ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများက COVID-19 ကာကွယ်ကုသရေးအတွက် အလှူငွေ များ ပေးအပ်လှူဒါန်း
ဒဂုံတောင်မြို့နယ် ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီမှ ရပ်ကွက်များသို့ COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ရေး ကလိုရင်း ပိုးသတ်ဆေးဖြန်းခြင်း ဆောင်ရွက်
အောင်လံမြို့နယ်၊ ပြလို့အခြေစိုက် Quarantine Center သို့ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီမှ Mask (၄၀၀) ခု၊ လက်သန့်ဆေး (၁၀) ဗူး နှင့် ငွေ ၁၅၀,၀၀၀ ကျပ် လှူဒါန်း
ရွှေကူမြို့နယ် ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများနှင့် ကျေးရွာများမှ ပါတီဝင်များ Door To Door ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်
Covid-19 ဥပဒေနှင့်အညီ ပြည်သူများ၏ ကျန်းမားရေးကို အလေးထားပြီး ညောင်လေးပင်မြို့နယ်အတွင်းရှိ ကျေးရွာအုပ်စုများသို့ မဲဆွယ်စည်းရုံး
အင်းတော်ကြီး။အောက်တိုဘာ(၁၆) ယမန်နေ့ မနက် ၈ နာရီ မိုးညှင်းမြို့နယ် အင်းတော်ကြီးဒေသ မိုင်းပုတ်အုပ်စု၊ တုံပင်ကြေးရွာတွင် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ၃ ဦးပါ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဆိုင်းဘုတ်ထူခြင်း …
ယနေ့ညနေ (၅. ၁၀) အချိန်တွင် ကရင်ပြည်နယ် ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီမှ ပြည်နယ်ပါတီအတွင်းရေးမှူး ဦးစန်းကို၊ ပြည်နယ်အမျိုးသမီးရေးရာတာဝန်ခံ ဒေါ်စန္ဒာဦး၊ ပြည်နယ်လူပ်ရှားမူ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ဒေါ်ခင်နီနီအောင်တို့သည် “”ဘားအံမြို့နယ် လှာကဒေါင်စံပြကျေးရွာအုပ်စု …
ညောင်လေးပင်၊ အောက်တိုဘာ ၁၅ ညောင်လေးပင်မြို့နယ် ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီမှ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် လောင်းများသည် ယမန်နေ့ မနက် ၈ နာရီ အချိန်မှစတင်ပြီး ညောင်လေးပင်မြို့နယ်အတွင်းရှိ မှော်ပြား၊ ကွင်းဒလကြီး၊ …
တောင်တွင်းကြီး၊ အောက်တိုဘာ(၁၅) တောင်တွင်းကြီးမြို့နယ် ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီမှ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ကိုယ်စား လှယ်လောင်း ဦးစောဝင်းမောင်သည် ယမန်နေ့တွင် ရွာသာကျေးရွာတွင် လူထုဟောပြောစည်းရုံးပွဲ ကျင်းပရာ ပါတီဝင်များ၊ ပါတီဝန်းရံအားပေးသူများ၊ …
The Electronic Transactions Law
2008 Constitution (Eng-MM)
July 16, 2020 USDP 2016
ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း) ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ ဒုဥက္ကဋ္ဌ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးအောင်သူနှင့်ဇနီး၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီမိသားစုတို့သည် ယမန်နေ့ နံနက် ၁၁ နာရီက လားရှိုးမြို့ရပ်ကွက်(၁၂) ရှိ အောင်သစ္စာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းသို့ သွားရောက်၍ ဝါဆိုသင်္ကန်း ဆက်ကပ် လှူဒါန်းခဲ့ကြသည်။
← နမ့်စန်တွင် ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီက အခြေခံပညာကျောင်းများသို့ COVID-19 ရောဂါ ကာကွယ်ရေး အထောက်အပံ့ ပစ္စည်းများလှူဒါန်း
ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်အသင်း လာလီဂါချန်ပီယံဖလား ၃၄ ကြိမ်မြောက် ရရှိ →
“မတူညီသောစွမ်းရည်ရှိသူများကို ပါတီဝင်အင်အားစုကြီးဖြစ်လာအောင် ယုံကြည်မှုက စုစည်းထား ကြောင်း” ပါတီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးဌေးဦး ပြောကြား
July 29, 2016 USDP 2016 0
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးပါတီ ဥက္ကဋ္ဌထားဝယ်အထက(၅)သို့ လက်ဆေးဘေစင်များလှူဒါန်း
July 23, 2020 USDP 2016 Comments Off on တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးပါတီ ဥက္ကဋ္ဌထားဝယ်အထက(၅)သို့ လက်ဆေးဘေစင်များလှူဒါန်း
လှိုင်သာယာမြို့နယ်ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ ရေဘေးသင့်ပြည်သူများအတွက် ဆန်နှင့် အ၀တ်အထည်များ သွားရောက်လှူဒါန်း
August 29, 2016 USDP 2016 0
ဒီကနေ့ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီဟာ ပြည်သူလူထုရဲ့အားကိုးအားထားပြုရမယ့်ပါတီဖြစ်တယ်ဆိုတာ ကျွန်မတို့ နားလည်လက်ခံယုံကြည်လာပြီဖြစ်ပါတယ်
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး မိတ္ထီလာခရိုင် သာစည်မြို့နယ်နှင့် ဝမ်းတွင်းမြို့နယ်များတွင် ဇူလိုင် ၂၅ ရက်က ပါတီဝင်အဆိုပြုလွှာပေးအပ်ပွဲများကျင်းပခဲ့ရာ ပါတီသို့ဝင်ရောက်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ဝမ်းတွင်းမြို့နယ် ဘုရားဖြူကျေးရွာအုပ်စု ရွာရှည်ကျေးရွာမှ မောင်စည်သူအောင်နှင့် သာစည်မြို့နယ် …
မဟာအောင်မြေမြို့နယ် မဟာအရှေ့ရပ်ကွက်မှ မောင်စိုင်းထက်ကျော်နှင့် ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ် ကံကောက်ကြီးရပ်ကွက်မှ မယွန်းမီမီဇော်တို့မှ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီသို့ ဝင်ရောက်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ​ပြောကြားသွား​သောစကားသံများ
အမျိုးသားရေးမူဝါဒကိုဦးတည်ပြီး ဒို့တာဝန်အရေးသုံးပါးကို ဦးထိပ်ထားဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့လိုပြည်သူတွေ အားကိုးထိုက်တဲ့ပါတီကြီးဖြစ်တာကို သိမြင်ကြားသိရတဲ့အတွက် ယုံကြည်စိတ်နဲ့ အခုလို ပါတီကိုဝင်ရောက်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်​။ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ပါတီရုံးခန်းမ၌ကျင်းပသော မန္တလေးမြို့ပေါ်လေးမြို့နယ် ပါတီဝင်အဆိုပြုလွှာစုပေါင်းပေးအပ်ပွဲအခမ်းအနားကို ဇူလိုင် …
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ညောင်ဦးခရိုင် ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့နယ်နှင့် မြင်းခြံခရိုင် တောင်သာမြို့နယ် ရုံးစည်ကြီးကျေးရွာတို့တွင် ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ၏ ပါတီဝင်အဆိုပြုလွှာ ပေးအပ်ပွဲအခမ်းအနားကို သက်ဆိုင်ရာနေရာအသီးသီးတွင် ဇွန်လ ၅ ရက်က ကျင်းပခဲ့ရာ …
ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီသို့ ဝင်ရောက်ရခြင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး ရုံးစည်ကြီးကျေးရွာမှ ဦး​သောင်း​ငွေ ၏ ရင်ဖွင့်စကားသံ
ကျွန်​​တော်​တို့ ရုံးစည်ကြီးဒေသ ပါတီဝင် အဆိုပြုလွှာ စုပေါင်းပေးအပ်ပွဲ အခမ်းအနားသို့ ကိုယ်တိုင်တက်ရောက် ချီးမြှင့်ပေးပါသော အဘ ဦးဝဏ္ဏမောင်လွင် ၊ အဘ ဦးဝင်းမောင် တို့ …
နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးအမြင်နှင့်ပတ်သက်၍ ဝံသာနုဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဒေါ်နန်းရွှေကြာ ကို ပြည်ထောင်စုနေ့စဉ်သတင်းစာမှ မေးမြန်းထားမှုများကို ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။
စိန်ခေါ်သူဒီရစ်ဒါနဲ့ အောက်တိုဘာ ၃၀ မှာ ထိုးသတ်သွားတော့မယ့် အောင်လအန်ဆန်
ONE ဝိတ်တန်းနှစ်ခုချန်ပီယံ မြန်မာ MMA ကစားသမား အောင်လအန်ဆန်၏ မစ်ဒယ်ဝိတ်တန်း ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံ ကာကွယ်ပွဲကို အောက်တိုဘာ ၃၀ ရက်တွင် ကျင်းပမည်ဖြစ်သည်။ အောင်လအန်ဆန်သည် မစ်ဒယ်ဝိတ်တန်း …
ယူရိုပါလိဂ်တစ်ရာသီလုံး အကောင်းဆုံးကစားသမားဆုကို အင်တာတိုက်စစ်မှူး လူကာကူရရှိ
မီလန် – အင်တာမီလန်မှဘယ်လ် ဂျီယံတိုက်စစ်မှူး လူကာကူသည် ၂၀၁၉-၂၀ ဘောလုံး ရာသီအတွက် ယူရိုပါလိဂ်အကောင်းဆုံး ကစားသမားဆုကို ရရှိခဲ့သည်။ အီတလီတွင် ပထမဆုံး ဘောလုံးရာသီအတွင်း ပြိုင်ပွဲ …
ယူအီးအက်ဖ်အေ တစ်နှစ်တာအကောင်းဆုံး ကစားသမားဆုကို လီဝမ်ဒေါစကီး ဆွတ်ခူး
ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီက ဆုဖလား(၅)လုံး ဆွတ်ခူးခဲ့တဲ့ ဘိုင်ယန်မြူးနစ်အသင်းအတွက် (၄၆)ပွဲ ကစားရာမှာ (၅၅)ဂိုးအထိ သွင်းယူနိုင်ခဲ့တဲ့ ပိုလန်တိုက်စစ်မှူး လီဝမ်ဒေါစကီးဟာ ဥရောပတစ်နှစ်တာအကောင်းဆုံး ကစားသမားဆုကို ထိုက်ထိုက်တန်တန် ဆွတ်ခူးသွားခဲ့ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီဟာ …
ချန်ပီယံလိဂ်၌ ဘာစီလိုနာနှင့် ဂျူဗင်တပ် တအုပ်စုတည်း တွေ့ဆုံ
ချန်ပီယံလိဂ်အုပ်စုအဆင့်မဲခွဲပွဲကို အောက်တိုဘာ ၁ ရက်က ကျင်းပခဲ့ရာမှာ ဘာစီလိုနာနဲ့ ဂျူဗင်တပ်တို့ တအုပ်စုတည်း တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ ဘာစီလိုနာတိုက်စစ်မှူး မက်ဆီနဲ့ ဂျူဗင်တပ်တိုက်စစ်မှူး ရော်နယ်ဒိုတို့ ပြန်လည်တွေ့ဆုံ ကြမှာ …
(၈)ကြိမ်မြောက် German Super Cup ကို ဆွတ်ခူးခဲ့တဲ့ ဘိုင်ယန်မြူးနစ်
ဒီကနေ့မနက်အစောပိုင်းက ကစားခဲ့ကြတဲ့ German Super Cup ဘောလုံးပြိုင်ပွဲမှာတော့ ဘိုင်ယန်မြူးနစ် အသင်းက ဒေါ့မွန်အသင်းကို ၃ ဂိုး၂ ဂိုးနဲ့ အနိုင်ရရှိခဲ့ပြီး၊ ဒါက(၈)ကြိမ်မြောက် German …
Snapdragon 865+ SoC သုံး 5G ဗားရှင်း Galaxy Z Flip တရားဝင်မိတ်ဆက်
ဩဂုတ်လ ၅ ရက်နေ့ Unpacked event ပွဲ မှာ မိတ်ဆက်မယ်လို့ သတင်းထွက်ထားတဲ့ Samsung Galaxy Z Flip 5G မော်ဒယ်ကို …
Samsung Galaxy M20 စမတ်ဖုန်းရဲ့ အသေးစိတ်အချက်အလက်ဖော်ပြထားတဲ့ ပုံကြမ်းထွက်ပေါ်လာ
Samsung ရဲ့အလယ်အလတ်တန်းစား Galaxy M စီးရီးစမတ်ဖုန်းကို ဇန်နဝါရီလ ၂၈ ရက်မှာ အိန္ဒိယနိုင်ငံအတွင်း ဖြန့်ချိသွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။ အဲဒီသတင်းကို Amazon India မှာဖော်ပြထားတယ်လို့ …
ပထမလအတွင်း Redmi Note7အလုံးရေ ၁သန်းအထိ ရောင်းချနိုင်ဖို့ Xiaomi ပစ်မှတ်ထား
ကျောဘက်ကင်မရာ 48 megapixel နဲ့ Snapdragon 660 chipset ပါဝင်ပြီး ဒေါ်လာ ၁၅၀ နဲ့ရောင်းချမယ့် Redmi Note7ကို …
ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် ဖြေဆိုလိုသူများ ရက်ချိန်းရယူခြင်းကို အွန်းလိုင်းမှ လျှောက်ထားနိုင်
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ဖြေဆို လိုသူတွေအနေနဲ့ ရက်ချိန်းရယူခြင်းကို အွန်လိုင်းမှ တစ်ဆင့် လျှောက်ထားနိုင်မယ်လို့ သိရပါတယ်။ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် ရယူလိုသူတွေ များပြားလာတဲ့အတွက် လိုင်စင်ဖြေဆိုလိုသူတွေအနေနဲ့ အချိန်ကြာမြင့်စွာ စောင့်ဆိုင်းရခြင်း၊ အချိန်ကုန်၊ …
စက်မှုမှတ်ပုံတင်ခြင်း အွန်လိုင်းစနစ်မှ လျှောက်ထားနိုင်
စက်မှုမှတ်ပုံတင်ခြင်းကို အွန်လိုင်းစနစ်မှ လျှောက်ထားနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ Myanmar National Portal ရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရပါတယ်။ ပုဂ္ဂလိက စက်မှုလုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်မှစပြီး အွန်လိုင်း …
Copyright © 2016 ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ. All rights reserved.